China Box feeder emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Box feeder bụ otu ụdị inyeaka erute equipments, chụpụrụ site a 7.5 / 11KW moto, moderately tensioned site a 3KW na-akwọ ụgbọala ala na ọdụ roller chụpụrụ site reducer ime ka belt aga n'ihu na uniformly na a ala ọsọ iji wuchaa ihe njem.
Igwe a dị mma maka ụlọ ọrụ ihe ụlọ dị ka mines, chemicals, brik, taịlị wdg. Ọ na-ewepụsị ihe ndị na-esighi na bins nchekwa ma ọ bụ ogige na-ebuga ha na akụrụngwa mgbada.
Box feeder na-agba ọsọ were were, nwere pụrụ ịdabere na arụmọrụ, na mfe iji rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe.
Ọrụ Ngwa nri
Prinkpụrụ ọrụ Nyefe ngwaọrụ
Igwe ahụ nwere nnukwu olu na ihe nchara zuru oke, yabụ iji gbochie nrụrụ, a ga-ebuli elu ahụ n'otu isi na isi anọ, na isi ihe nrụgide abụọ ahụ ga-agabiga ogwe igwe nchara abụọ (isi ihe abụọ na-eche nche bụ akụkụ abụọ ahụ) nke igbe).
Kwesịrị itinye mmanụ gia na igbe belata, bọta nke lithium na gia na agbụ tupu ojiji. A ga-etinye eriri nke ala nke ọkpọ ahụ na roba ma tinye roba ahụ na teepu ahụ. Tinye eriri waya iji dozie ntụgharị nke teepu ahụ. Iburu kwesịrị ịgbakwunye butter (na-abụkarị otu ugboro kwa ọnwa atọ).
A na-ejikarị igwe na-adụpụta ígwè bụ A3 nchara, anaghị eji ihe siri ike na ihe na-agba agba iji zere imebi, n'ihi na ọ nwere ike ịdaba na usoro ọzọ iji mebie igwe ahụ. A ga-eji mkpara ígwè kpuchie mkpara ndị ahụ iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ.
Nke gara aga: Efere nri
Osote: Ugboro abụọ rotor Hammer Crusher